SCH 40 သံမဏိပိုက်လျောက်ပတ် BS ပေါင်းလိုက်သောပိုက်နို့သီးခေါငျး - တရုတ် Hebei Jinmai ကာစ်
သွပ်ရည်စိမ် & Black က
"6 ဖို့" 1/2
တစ်လလျှင် 2000 တန်
တစ်လလျှင် 2000 တန် / တန်ချိန်
နဲ့အတူ / PALLETS မရှိဘဲနဲ့ပုံး IN
ရက်ပေါင်း 30 အတွင်း
3. 0.3 အမေရိကန်ဒေါ်လာ / PC များ
SCH 40 သံမဏိပိုက်လျောက်ပတ် BS ပိုက်နို့သီးခေါငျးပေါင်းလိုက်သော:
1. Factory သတင်းအချက်အလက်များ
ကျော်ကို 1500 လုပ်သားများအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်အတူကျော် 10 အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲရှိသည်။
အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောအထုပ်အမျိုးအစား။ တောင်းဆိုချက်များအပေါ်အခြေခံပြီး customization နိုင်ဘူး။
ယခင်: အရည်အသွေးပထမဦးစွာရေပေးဝေရေးပျော့သံပစ္စည်းအမျိုးအစားလမ်းဆုံ Box ကိုသေချာ
နောက်တစ်ခု: သံပိုက် fittings Tee ထုတ်ကုန်ကိုနှင်ထုတ်
နှစ်ချက် thread ဆဋ္ဌဂံနို့သီး
နှစ်ချက် Thread နို့သီးခေါငျး
နှစ်ချက် Thread ပိုက်နို့သီးခေါငျး
အပြည့်အဝ thread နို့သီးခေါင်း
hex နို့သီးခေါငျးလျောက်ပတ် Gi ပိုက်
Hebei နို့သီးခေါငျးပျော့သံပိုက် Fittings
hex နို့သီးခေါင်းပိုက် Fittings
Long က Thread က Black ပိုက်နို့သီးခေါငျး
အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်အမျိုးသား Thread နို့သီးခေါငျး
NPT ကိုနှစ်ချက်ပိုက်နို့သီးခေါင်း threads
NPT thread ပိုက်နို့သီးခေါင်း
NPT Threaded ပိုက်နို့သီးခေါင်း
နို့သီးခေါငျး 280 အသေးစိတ်လျောက်ပတ်ပိုက်
ပိုက်ပြင်ပိုက် Threaded နို့သီးခေါငျး
လျှော့ hex နို့သီးခေါငျး
နှစ်ဦးအမျိုးသား Threaded ပိုက်နို့သီးခေါငျး